Digital Tree Myanmar
e-commerce website ဆိုသည်မှာ Customer များ ထို website မှ တိုက်ရိုက် ဈေးဝယ်ယူနိုင်သော အရောင်း အဝယ် လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်လို့ရသည် website တစ်မျူးိး ဖြစ်ပါသည်။
website တစ်ခုတွင် Product / Service တစ်ခုခုကို ဝယ်ယူ / ရောင်းချနိုင်ရန် အတွက် Shopping Card လိုမျိူး Feature များပါဝင်နေပြီး
ငွေပေးချေမှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုပါဝင်နေခဲ့လျှင် ထိုကဲ့သို့ Website ကို ယျေဘူယျ အားဖြင့် E-commerce Category အမျိူးအစား အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
Business Webiste ဆိုသည်မှာ မိမိ Business အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆောက်ထားသော Website အမျိူးအစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့တည်ဆောက်သည့်အခါတွင် မိမိ လုပ်ငန်း Logo ကို Branded အဖြစ် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ မိမိလုပ်ငန်းမှ Product and Service များ Offer များလုပ်နိုင်ရန် အတွက် လည်း ဆက်သွယ်နိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားပေးသင့်ပါသည်။
E-commerce website များသည်လည်း Business Type များဖြစ်ကြပါသည်။ သို့သော် Business Website များသည် Webstie ထဲတွင် E-commerce များကဲ့ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းများ မရှိဘဲ မိမိ Business Product and Service များကို ကြည့်ရှုလေ့လာခွင့်များ ပေးထားပြီး ပိုမို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက
မိမိ Business သို့ ဆက်သွယ်ရန် အတွက် ဖန်တီးပေးထားခြင်းမျိူးဖြစ်သည်။
Entertainment Website ဆိုသည်မှာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Entertainment အမျိူးအစားများကို ရွေးချယ်တင်ဆက်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆောက်ထားသည့် Webstie အမျိူး အစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Portfolio Website ဆိုသည်မှာ အတိတ်တွင် မိမိ (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုရဲ့ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့မှုများကို ပြသထားသည့် Showcase Website အမျိူး အစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မိမိရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့လုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်း မိမိရဲ့ သမိုင်းကြောင်းများအကြောင်းကို ဖေါ်ညွှန်းပြသရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့် website အမျိူးအစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Media Webiste ဆိုသည်မှာ သတင်းများ၊ ဖြစ်စဉ်များ၊ reports များ ကိုစုစည်းထားရှိပေးသော Website အမျူးိ အစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Entertainment Website အမျူးိ အစားနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူသော်လည်း အတိအတကျ ထပ်တူညီမှုမရှိပါ။ Media Website သည် Reports များ ဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်းများစွာကို ထည့်သွင်းဖေါ်ပြမှုများ ပိုမိုပါရှိလာပါသည်။
Media Webiste များသည် Website ထဲ ယျေဘူယျအားဖြင့် ကြော်ငြာများထည့်သွင်းလေ့ရှိြ့ပီး ထိုကြော်ငြာများမှ ဝင်ငွေများ ရရှိလေ့ရှိပါသည်။
Brochure Website ဆိုသည်မှာ ရိုးရှင်းသော Business Website အမျူးိးအစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မိမိရဲ့ Business ကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပြသထားခြင်းမျိူးဖြစ်သည်။ သို့သော် Business Website များကဲ့သို့ အချိန်များစွာ အကုန်အကျခံကာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာကို ဖော်ပြထားချင်းမျူးိ မရှိဘဲ မိမိ Business များကို ယျေဘူယျ အနေဖြင့် ဖော်ပြရန် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆောက်လေ့ရှိကြပါသည်။
Nonprofit Website ဆိုသည်မှာ Nonprofit လုပ်ငန်းများအတွက် မိမိတို့သည် မည့်သည့် Vision, Mission များကို လုပ်ကိုင်နေပြီး လျှောက်လှမ်းနေကြသည်များကို လူူအများသိရှိနိုင်ရန်ဖော်ပြန်ရန် အတွက် တည်ဆောက်လေ့ရှိကြပါသည်။ ထို့အပြင် New Donors များအတွက်လည်း ဖိတ်ခေါ်သည့် ကြော်ငြာမှုများ ပါဝင်နေလေ့ရှိပြီး ယျေဘူယျအားဖြင့် Nonprofits လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ရပ်တည်ရန်အတွက် အထောက်အပံများလည်း ရရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆော်က်လေ့ရှိကြပါသည်။
Online တွင် မိမိ Education System မှ ဝန်ဆောာင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆောက်သော Website အမျူးိး အစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Online Course, Online Training, Online Tutorials, Online Chapters, Online Registration များ စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ချက်များ ပါဝင်လေ့ရှိပြီး မိမိရဲ့ Educatio System ကို Upgrade လုပ်သည့် Website အမျူးိ အစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Personal Website ဆိုသည်မှာ Personal ဖြစ်စဉ်များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်များ၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များ၊ အတွေးခေါ်များ၊ မှတ်စုများ၊ မိမိ share လိုသည်များကို မိမိ တင်ပြ ပြသချင်သလောက် Public ကို ပြသပေးနိုင်သော Website အမျူးိးအစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
10. Web Portal
Web Portal ဆိုသည်မှာ မိမိတို့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ အစုအဝေး တစ်ခု အတွက် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော Website အမျူးိ အစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သတင်း အချက်အလက်များကို ဖန်တီးခြင်း ပြန်လည်ယူဆောင် အသုံးပြုခြင်း ၊ သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း စသည့်ဖြစ်စဉ်များကို အသုံးပြုသူ Users များဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အပိုင်းအလိုက် ခွဲခြမ်းလု်ပဆောင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆောက်ထားသော Website တစ်ခုဖြစပ်ပါသည်။
Public Purpose အနေဖြင့်ဖန်တီးထားသော Web Portal များနှင့် Private Organization Purpose အနေဖြင့်ဖန်တီးထားေသော Web Portal များ ဆိုပြီး ခွဲခြား တည်ဆောက်လေ့ရှိကြပါသည်။
ဥပမာ အားဖြင့် ကျောင်းများ ၊ သင်တန်းများ ၊ private company ၊ private organization များအတွက် သီးသန့် Web Portal များရှိသလို Public အတွက် Web Portal များလည်းရှိသည်။
11. Wiki or Community Forum Website
ယနေ့ခေတ်တွင် လူတော်တော်များများ အားလုံးနီးပါး Wikipedia ဆိုသည်ကို သိရှိကြပြီး အသုံးဝင်သည့် Website တစ်ခုဖြစ်မှန်း သိရှိကြပါသည်။ Wiki website သည် ယျေဘူယျ အားဖြင့် Organization တစ်ခု ၊ Community တစ်ခု အတွက် User များမှ ပူးပေါင်းကာ အသင်း အချက်အလက်များကို ဖန်တီးခြင်း ၊ ပြုပြင် ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ပိုမို ကောင်းမွန်လာအောင် ပြုပြင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် website အမျိူး အစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
တစ်ခြားသော Website Categories များလည်းရှိပါသည်။ ယခု ဖေါ်ပြခဲ့သော Website အမျိူး အစားများသည် Popular ဖြစ်သော website အမျိူးးအစားများသာဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအရာ များ အားလုံးသည် ယျေဘူယျ အကြောင်း အရာများသာြဖြစ်ပါသည်။
ၤFor Customer / Business Owner / Website Owner View
အကယ်၍ သင်သည် Business တစ်ခုခု အတွက် (သို့မဟုတ်) လိုအပ်ချက်တစ်ခု အတွက် Website တစ်ခု ဖန်တီးဖို့လိုလာလျှင်
မိမိသည် Website တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်သည့် အခါတွင် မိမိလိုအပ်သော Website Category ကို ကြိုတင်၍ သိနေနှင့်သင့်ပါသည်။
For Web Developer / Website Creator View
Customer ရဲ့လိုအပ်ချက်များ အပေါ်မူတည်ပြီး Web Developer များသည် အထက်ဖေါ်ပြပါ Website အမျိူး အစားများကို ဖန်တီး ရေးသား နိုင်ကြပါသည်။
A place where u can learn about
web developement such as HTML ,
Laravel Framework , and more.
Blk 56, #G-01, Zalun Street,
+959 - 4200 88 636
Copyright © 2022 Digital Tree Myanmar. All Right Reserved.